NgoLwesithathu, Matshi 16, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Wonke umntu ujonge iindlela zokunyusa ngokupheleleyo umxholo wabo Martech Zone akukho mahluko. Uninzi lwabafundi bakho luya kufunda umxholo wakho emva koko bakope kwaye bancamathisele iziqwengana ukuze bazithumele kwabanye okanye bazifake kwizithuba zabo. I-Tynt yinkonzo onokuyifaka ngokulula ekhangela ikopi kwaye yongeza i-URL yakho kumxholo okhutshelweyo. Xa uncamathisela umxholo kwenye indawo… vela… umxholo wakho uncanyathiselwe kunye nekhonkco elibuyela kwindawo yakho.
Nantsi ividiyo entle echaza inkonzo kaTynt:
UTynt uthetha ngamandla ekhonkco ngokubhekisele kwi-SEO. Ukuba umntu othile uyawuthanda umxholo kwaye apapashe, unekhonkco elilungileyo elibuyela kwindawo yakho. Ndicinga ukuba oku kulungile - kodwa ndibona ixabiso ngakumbi kwinto yokuba ikhonkco libonelelwe ngabafundi ukuba bacofe ii-imeyile nakwezinye iindawo.
Kwinyanga ephelileyo, uTynt ufumanise ukuba umxholo wam ukhutshelwe amaxesha angama-703, kwaye inani elivelileyo labakhenkethi belingama-4. Amakhonkco amatsha angama-330 enzelwe umxholo-kubathengi be-imeyile, iibar zesixhobo seebrawuza, kunye namanye amaxwebhu (ayizizo zonke Isibonelelo se-SEO… kodwa mhlawumbi bambalwa!). Ezi zibalo azonelanga ukuba ziye endle ngaphezulu, kodwa kuninzi ngale nkonzo ilula. Okona kuncinci, ndiyayithanda inyani yokuba ndifumana ikhredithi xa abantu bekopa umxholo wam kwaye bayithumela kwinethiwekhi yabo.
I-Tynt ikwabonelela ngengxelo eneenkcukacha malunga nokuba ngowuphi umxholo okhutshelweyo kunye nokuncamathiselwa- oku kunokuba luncedo njengoko uqala ukuphanda ukuba yeyiphi imixholo kwindawo yakho ethandwayo. Zivavanye ngokwakho-khuphela umxholo othile kule post kwaye uyikope kwi-imeyile.
Inqaku lokugqibela… andisayikhumbuli indlela endamfumana ngayo uTynt… kodwa ndiqinisekile ukuba omnye wabahlobo bam okanye abafundi bandixelele ngayo kwaye ndilibale ukuba ngubani! Ukuba ibinguwe… undazise kwaye ndiza kuyihlaziya le posi ngekhredithi ethile.
Yeka ukubiza abathengisi ngamavila!
UPeter Van Dam Broker
Mar 17, 2011 ngo 6:02 PM
Ngaba ikhonkco linokuya kwividiyo ye-youtube nayo? Ngaba iyakukunceda ividiyo inyukele phezulu kukhangelo?